News - Igwe ọkụ nke anyanwụ
1. So ahohiahia kɛse no befi ase?
N'ikwu okwu n'ozuzu, a ga-atụ anya batrị ndị dị na ọkụ ndị dị n'èzí na-adịru ihe dị ka afọ 3-4 tupu ọ ga-adị mkpa ka edochie ha. Ndị ọkụ ahụ nwere ike ịga afọ iri ma ọ bụ karịa.
Ga-amara na oge eruola ịgbanwe akụkụ mgbe ọkụ anaghị enwe ike ịkwado ụgwọ iji mee ka ebe ahụ nwee ọkụ n'abalị.
E nwere ihe ole na ole na-agbanwe agbanwe nke nwekwara ike imetụta ndụ nke ọkụ anyanwụ gị n'èzí.
Maka otu, ntinye ha n'ihe metụtara ọkụ ndị ọzọ nwere ike ibelata ma ọ bụ mee ka ogologo ndụ ha dịkwuo elu. Gbalisie ike na etinye ọkụ eletrik gị nke dị n'èzí na-enwu n'anyanwụ nke dị anya site na ọkụ n'okporo ámá ma ọ bụ ọkụ ụlọ, ebe ọ bụ na ịbịaru nso nwere ike tufuo ihe mmetụta ndị na-eme ka ha na-agbanye n'ọkụ.
Ewezuga ọnọdụ ha, ịdị ọcha nke igwe na-acha ọkụ nwekwara ike bụrụ ihe dị mkpa na nchekwa ọkụ. Karịsịa ma ọ bụrụ na ịnwere ọkụ gị dị n'akụkụ ogige ma ọ bụ ebe ọzọ na-adịghị ọcha, jide n'aka na ị ga-ehichapụ ogwe kwa izu ọ bụla ka ha wee nwee ìhè anyanwụ zuru ezu.
Ọ bụ ezie na e mepụtara ọtụtụ sistemụ ọkụ iji nagide ụdị ihu igwe na ihu igwe dị iche iche, ha na-arụ ọrụ nke ọma mgbe ha nwere ike ịnata ụbọchị zuru oke nke ìhè anyanwụ ma ọ bụghị n'ihe egwu nke ịbụ ndị snow kpuchiri ma ọ bụ kụrụ site na oke ifufe. Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihu igwe n'oge ụfọdụ nke afọ na-emetụta ọkụ anyanwụ gị, tụlee ịchekwa ha maka oge ndị a.
2. Ogologo oge ole ka ọkụ anyanwụ na-enwu?
Ọ bụrụ na ọkụ ndị dị n’èzí na-enweta ìhè anyanwụ zuru ezu maka ụgwọ zuru ezu (ọ na-abụkarị ihe dị ka elekere asatọ), ha ga-enwe ike ịnye ọkụ na mgbede niile, bido mgbe ọkụ dara, n’akụkụ ọdịda anyanwụ.
Mgbe ụfọdụ ọkụ ga-anọ ogologo oge ma ọ bụ karịa, nsogbu nke a na-enwekarị ike ịkọwa na akụkụ ahụ nwere ike ịmị ọkụ. Ọzọkwa, ịlele iji jide n'aka na ọkụ gị dị na ntụpọ kachasị mma (na ìhè anyanwụ, site na ndò ma ọ bụ na-ekpuchi osisi) nwere ike inyere aka hụ na ha na-arụ ọrụ ha kacha mma.
Ọ bụrụ na ọ na-echegbu gị na a na-eji batrị ọkụ gị eme ihe nke ọma, tụlee ma ọ bụ tọọ oge maka ọkụ ma ọ bụ gbanyụọ ya na / ma ọ bụ dowe ya ruo oge ụfọdụ. Nwere ike ịchọ nwalee ebe dị iche iche ole na ole tupu ị kpebie ebe ga-adịgide maka ọkụ gị.
3. Ndụ anyanwụ na-enye nsogbu nchọpụta ndụ
Nwere ike ịchọpụta na n'ime ndụ nke ìhè gị, na ị na-ezute ụfọdụ nsogbu na ịrụ ọrụ ha.
Nsogbu ndị a na-ahụkarị gụnyere batrị ịnwụ, ọkụ na-esighi ike n'ihi nchacha ọkụ nke anwụ, ma ọ bụ nrụrụ ọkụ izugbe. Enwere ike iwepụta nsogbu ndị a na afọ nke ọkụ ọkụ gị ma ọ bụ ịdị ọcha nke ogwe ọkụ nke onwe ha.